လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုအတွက် သံသယရှိသူများတွင် တပ်မတော်မှအရာရှိဟောင်းများ ပါဝင်နေခြင်းသည် ကချင်၊ ရှမ်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်များတွင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုစွပ်စွဲချက်များ ရင်ဆိုင်နေရသော မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် မကောင်းချေ | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုအတွက် သံသယရှိသူများတွင် တပ်မတော်မှအရာရှိဟောင်းများ ပါဝင်နေခြင်းသည် ကချင်၊ ရှမ်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်များတွင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုစွပ်စွဲချက်များ ရင်ဆိုင်နေရသော မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် မကောင်းချေ
လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုအတွက် သံသယရှိသူများတွင် တပ်မတော်မှအရာရှိဟောင်းများ ပါဝင်နေခြင်းသည် ကချင်၊ ရှမ်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်များတွင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုစွပ်စွဲချက်များ ရင်ဆိုင်နေရသော မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် မကောင်းချေ
March 24, 2017 March 24, 2017 drkokogyi
Ye K Htwe shared The Irrawaddy – Burmese Edition‘s post.
ဦးကိုနီကို လုပ်ကြံသူတွေ ဘယ်ရောက်နေကြသလဲ?
The Irrawaddy- Burmese Edition
ရှေ့နေဦးကိုနီ သတ်ဖြတ်ခံရပြီး တလခွဲကျော်ကြာသည်အထိ အမှုနောက်ကွယ်မှ အဓိက ကြိုးကိုင်သူနှင့် လျှို့ဝှက်ကြံစည်သူများမှာ လွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်သည်။
သူတို့ကို မကြာမီ ဖမ်းမိမည်လားဆိုသည်မှာ ကျနော်တို့ အားလုံး စောင့်မျှော်နေသောအရာ ဖြစ်သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥပဒေအကြံပေးကို သတ်ဖြတ်ရာတွင် အဓိက လက်သည်အဖြစ် စွပ်စွဲခံရသူ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ဟောင်း အောင်ဝင်းခိုင်မှာ မြို့တော် နေပြည်တော်တွင် ထူးထူးဆန်းဆန်း ပျောက်ဆုံးသွားပြီး အခုအထိ လွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် သောကြာနေ့ကမူ သေနတ်သမားကြည်လင်းနှင့် ထိုအမှုတွင် သံသယရှိသူ သုံးဦးတို့ကို ရန်ကုန် မြောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ဗိုလ်ဟောင်း အောင်ဝင်းဇော် (အောင်ဝင်းခိုင်၏အကို) ၊ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ဇေယျာဖြိုး၊ သေနတ်သမားကြည်လင်းနှင့် အမှုတွင် စွပ်စွဲခံရသူ အသစ်ဖြစ်သော အောင်ဝင်းထွန်းတို့ ဖြစ်သည်။
ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်ခဲ့သည့် ဤလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုတွင် အောင်ဝင်းခိုင် နောက်ကွယ်၌ အဓိက ကြိုးကိုင်သူ ရှိလိမ့်ဦးမည်ဟု ပြည်သူလူထုက ယူဆသည်။ ဤလုပ်ကြံမှုကို အဓိကကြိုးကိုင်သူအား ယနေ့အထိ ဖမ်းဆီးအရေးမယူနိုင်ခြင်းကြောင့် အမှုကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရသော ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အပေါ် ဝေဖန်စရာများ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့က ရန်ကုန်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်တွင် ဦးကိုနီလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ပြည့်သော စနေနေ့က ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပသော အခမ်းအနားတခုတွင် အာဏာရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာယက ဦးတင်ဦးက အမှုတွင် အရေးကြီးသော သံသယရှိသူများကို ယခုအချိန်ထိ မဖမ်းမိသေးခြင်းကို သူအနေနှင့် အံ့သြမိသည်ဟု ပြောသည်။ ထိုသူများကို အမြန်ဆုံး ဖမ်းဆီးရန် အာဏာပိုင်များကိုလည်း တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
ဦးတင်ဦးလိုပင် လူထုကလည်း အမှု၏နောက်ကွယ်မှ အမှန်တရားကို စိတ်မရှည်စွာ စောင့်စားနေကြပြီး သတ်ဖြတ်ခံရသူ၏ မိသားစုမှာလည်း အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေး စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ ဤအမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒွိဟဖြစ်စရာ အဖြေမရှိသေးသည့် အောက်ပါ မေးခွန်းများလည်း ထွက်ပေါ်နေသည်။
အောင်ဝင်းခိုင်သည် အဘယ်ကြောင့် အခြားရာဇဝတ်သားများ ထွက်ပြေးလေ့ရှိသည့်နေရာများသို့ တိမ်းရှောင်ခြင်းမရှိဘဲ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုံခြုံရေး အတင်းကျပ်ဆုံးဖြစ်သော နေပြည်တော်သို့ ပြေးရသနည်း။
အဓိက သံသယရှိခံရသူများ အားလုံးသည် စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းများ ဖြစ်သည် ဟူသောအချက်၏ နောက်ကွယ်တွင် မည် သည်အကြောင်းတရား ရှိနေသနည်း။
အမှုနောက်ကွယ်တွင် အဖွဲ့အစည်းတခုခု (သို့မဟုတ်) ထိုအဖွဲ့အစည်းထဲမှ ထိပ်ပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်နေသလား။
သံသယရှိသူများသည် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုအတွက် အဘယ်ကြောင့် သိန်းတထောင် သုံးနိုင်သနည်း။
မည်သည့်အတွက်ကြောင့် အောင်ဝင်းခိုင်ကို ယခုအထိ မဖမ်းနိုင်သေးသနည်း။
ထိုမေးခွန်းအားလုံးမှာ မေးသင့်မေးထိုက်သော မေးခွန်းများဖြစ်ပြီး ပြည်သူလူထုသည် အမှုတွင် ပျောက်နေသော ကွင်းဆက်များကို ဆက်စပ်ရန် ကြိုးစားနေကြသည်။
စစ်တပ်က ရေးဆွဲခဲ့သော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အပြင်းအထန် ဝေဖန်ပြီး ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းမဆန်သော ဖွဲ့စည်းပုံအား ပြင်ဆင်ရေး တစိုက်မတ်မတ် တိုက်တွန်းခဲ့သောကြောင့် ဦးကိုနီကို ပစ်မှတ်ထားသတ်ဖြတ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ယုံကြည်သူ အများအပြားရှိနေသည်။
အထက်ပါ မေးခွန်းများအနက် အတော်များများအတွက် မေးခွန်းထုတ်စရာ အကြီးဆုံးဖြစ်နေသည်မှာ ထိုအမှုတွင် အဓိက ပါဝင်ပတ်သက်နေသူ အားလုံးသည် အဘယ်ကြောင့် တပ်မတော်အရာရှိဟောင်းများ ဖြစ်နေသနည်းဆိုသည့် အချက်ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းတဦးဖြစ်သူ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏လက်ရှိ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းဇော်ထွန်းကိုလည်း အောင်ဝင်းခိုင်၊ ဇေယျာဖြိုးတို့နှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး အတူ ရိုက်ထားသည့် ဓါတ်ပုံအချို့ပြန့်နှံ့လာသည့်အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့က စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့သည်။
အဆိုပါအချက်များကြောင့် အမှုတွင် နောက်ကွယ်ကြိုးကိုင်နေသူများထဲတွင် တပ်မတော်ထဲမှ လက်ရှိ သြဇာအာဏာရှိသူများ ပါသလား (သို့မဟုတ်) ၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်သူများ ပါဝင်နေသလားဟု ပြည်သူအများက သံသယရှိနေကြသည်။
ထိုသံသယမှာလည်း ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်အောင် မဖော်ထုတ်နိုင်သေးသ၍ အမှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည့် ဆက်လက် ကြီးထွားနေမည်သာဖြစ်သည်။
ထိုသံသယကို မည်သူမျှ လူသိရှင်ကြား မေးခွန်းမထုတ်ရဲကြသေးပေ။ သို့သော် တပ်မတော်ကလည်း ထိုသံသယကို ငြင်းဆိုထားပြီးဖြစ်သည်။
ဦးကိုနီ လုပ်ကြံမှု နောက်ကွယ်တွင် အဖွဲ့အစည်းတခုခုပါဝင်ပတ်သက်ပါသလားဟု မေးသောအခါ တပ်မတော်သည် ထိုအမှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မရှိကြောင်း စစ်တပ်၏ ကြည်း၊ ရေ၊ လေ ပူးပေါင်းညှိုနှိုင်း ကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦးက ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့က ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အမှုတွင် တပ်မတော်အရာရှိဟောင်းများ ပါဝင်မှုကြောင့် တပ်မတော်အပေါ် အများက သင်္ကာမကင်း ဖြစ်နေသည်ကို စစ်ဘက်ထိပ်တန်းအရာရှိများ သိရှိနေကြောင်း သူ၏ အဖြေက ပြသနေသည်။
ဦးလင်းဇော်ထွန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် စွပ်စွဲချက်များကိုလည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦးက ပယ်ချသည်။ “သူ (လင်းဇော်ထွန်း) ပါဝင်ပတ်သက်ရင်တောင်မှ ဒါက တပ်မတော်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ သူ စစ်တပ်က ထွက်ပြီးသားဖြစ်နေပြီ။ သူ့မှာ အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရရင်တောင် တပ်မတော်နဲ့မဆိုင်ဘူး” ဟု ပြောခဲ့သည်။
သို့သော် အဓိက သံသယရှိခံရသူ နှစ်ဦးဖြစ်သည့် အောင်ဝင်းခိုင်၊ ဇေယျာဖြိုးတို့နှစ်ဦးနှင့် ဦးလင်းဇော်ထွန်းတို့ အကြားမှ ရင်းနှီးသော ဆက်ဆံရေးအပေါ် သံသယများ ဆက်လက်ကျန်ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ဦးလင်းဇော်ထွန်းသည် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံရေးအရာရှိအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ဖူးသည်ဟု ဖော်ပြမှုများလည်း ရှိသည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် တပ်မတော်မှ ထွက်ခဲ့သည်။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် တပ်မတော်တို့၏ ထိုအမှုနှင့်ပတ်သက်သော ရပ်တည်ချက်မှာလည်း အာဏာရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကွဲပြားနေသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လက ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပသော ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှု တလပြည့်အခမ်းအနားသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး သေနတ်သမားကြည်လင်းကို ဖမ်းဆီးရန် ကြိုးစားစဉ် သေဆုံးခဲ့သော အငှားယာဉ်မောင်း ကိုနေဝင်းနှင့် ဦးကိုနီ တို့သည် အာဇာနည်များဖြစ်သည်ဟု ချီးမွမ်းပြောခဲ့သည်။
ထိုနေ့မတိုင်မီ တရက် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်ဆွေက ဦးကိုနီကို သတ်ဖြတ်သူများသည် အစွန်းရောက်မျိုးချစ်စိတ်က စေ့ဆော်ပြီး လူငယ်သဘာဝပုဂ္ဂိုလ်ရေး မုန်းတီးမှုကြောင့် သတ်ဖြတ်မှုဖြစ်စေသည်ဟု လျှော့ပေါ့ပြောဆိုခဲ့သည်။
သူ၏စကားမှာ အရပ်ထဲနှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် ဝေဖန်စရာဖြစ်ခဲ့ပြီး ထိုအချက်ကို တပ်အကြီးအကဲများလည်း သတိပြုမိကြမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုအတွက် သံသယရှိသူများတွင် တပ်မတော်မှအရာရှိဟောင်းများ ပါဝင်နေခြင်းသည် ကချင်၊ ရှမ်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်များတွင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုစွပ်စွဲချက်များ ရင်ဆိုင်နေရသော မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် မကောင်းချေ။
ထိုသို့ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်မှုကို ပြန်လည်အဖတ်ဆယ်ရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် အမှုပေါ်ပေါက်ရေး ကူညီနေသော တပ်မတော်တို့အနေဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် တခုတည်းသော နည်းလမ်းမှာ အဓိက တရားခံအားလုံးကို ဖော်ထုတ်ပြီး အမြန်ဆုံး တရားခွင်သို့ ပို့ဆောင်ရန်သာ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက အမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး သံသယများ ဆက်လက်ပျံ့နှံ့ကြီးထွားနေမည်သာ ဖြစ်သည်။
ပြည်သူအများစုမှ စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်ခံနေရသည့် ဤလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုသည် အဓိကသံသယရှိသူတဦးဖြစ်သည့် အောင်ဝင်းခိုင် နေပြည်တော်တွင် ပျောက်သွားသကဲ့သို့ လွယ်လွယ်ကူကူ ပျောက်ကွယ်မသွားသင့်ပေ။
(ဧရာဝတီ အင်္ဂလိပ်ပိုင်းပါ Kyaw Zwa Moe ၏ Where are the Assassins? ကို ဘာသာပြန်ဆိုသည်)
← မန္တလေးမြို့မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ်းဟာ မမြင်ရတဲ့ လျှို့ဝှက်ကြံစည်သူလက်တွေက နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက် ကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်း အတိုင်း ကျူးလွန်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ တရားမျှတမှုအဖွဲ့ (Justice Trust)က ထုတ်ပြန် ပါတယ်။
Meiktila, the city of deaths or Dead city →